iOS 11 beta မှ iOS 10 ကိုလျှော့ချလိုပါသလား။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြပေးပါမယ် အိုင်ဖုန်းသတင်း
Apple သည်ယခင် iOS 11 ဗားရှင်းများကိုဆက်လက်လက်မှတ်ရေးထိုးနေသရွေ့အဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုလွယ်ကူစွာရနိုင်သည်။ iOS 11 အများသုံး beta ရုံ Cupertino ယောက်ျားတွေအားဖြင့်ဖြန့်ချိပြီးတော့ ရိုးရိုးအဆင့်အနည်းငယ်နဲ့ iOS 10.3.2 ကိုပြန်သွားပါ.
beta version အားလုံးသည် developer ဖြစ်စေအများသုံးဖြစ်စေယခင် version များသို့ပြန်သွားခွင့်ပေးသည်။ သင်ဤ bug မ်ားကိုသတိထားမိလျှင် (သို့မဟုတ်) beta version တွင်ငြီးငွေ့နေလျှင် iOS 10.3 သို့အလွယ်တကူပြန်သွားနိုင်သည်။ .x iTunes ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ beta တပ်ဆင်ခြင်းမတိုင်မီ backup တစ်ခုလိုအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad ကိုအများပြည်သူ beta version တွင်ရရှိပြီးသည်နှင့် iTunes ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးစစ်ဆေးရမယ့်အရာကတော့ငါတို့မှာရှိတာ iTunes ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac သို့မဟုတ် PC တွင် install လုပ်ပြီးအသုံးပြုပါ မူရင်းအိုင်ဖုန်းသို့မဟုတ် iPad ကေဘယ် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်။ ဤအချက်နှစ်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်ရပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်သည်။
iPhone နဲ့ iPad ကို Mac နဲ့ချိတ်ထားတယ် "စတင်" နှင့် "ပါဝါ" ခလုတ်များ (iPhone7/ iPhone7Plus ပါဝါခလုတ် + အသံအတိုးအကျယ်နှင့်) Apple logo ကိုပေါ်လာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းပြီး၊ ဆယ်တင်ရေးစနစ်၎င်းသည် iTunes အိုင်ကွန်နှင့်ကေဘယ်လ်ဖြစ်သည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့ Mac အတွင်းရှိ Mac / PC ကိုနှိပ်ရမည် iPhone သို့မဟုတ် iPad ကို Restore လုပ်ရန် option နှင့် deactivate, ငါကမှတဆင့်တက်ကြွခဲ့လျှင်ငါ့ iPhone ကိုရှာပါ Apple ID နှင့်စကားဝှက်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်နှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အဟောင်းသိမ်းဆည်းမှုကိုပြန်ယူလိုသလားသို့မဟုတ် iPhone / iPad အသစ်အဖြစ်အသစ်ပြုပြင်မည်လောဟုမေးမြန်းလိမ့်မည်။ အစမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ backup ကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပါ။
အမှန်တရားမှာ iPhone သို့မဟုတ် iPad ကိုလက်ရှိဗားရှင်း၌ပြန်ထားရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင် backup ကိုပြုလုပ်ရန် beta ကို install လုပ်တိုင်းအရှုံးမရှိလျှင်ပြန်သွားရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါ idevice ၏ဒေတာ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေအဆိုးဆုံးအခြေအနေ၌အတိအကျဖြစ်လိမ့်မည် ဒေတာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားမှာပါ။ အဲဒါကို iPhone (သို့) အိုင်ပက်ဒ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြုပြင်ဖို့လိုလိမ့်မယ်.
အချို့သောအသုံးပြုသူများသည် iPhone version ကို download လုပ်ရန်အခက်အခဲရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုဖြေရှင်းပြီးဖြစ်သည် iOS 10.3.3 beta ကို download လုပ်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ရန်ရှိသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ iPhone ကို Recovery Mode ထဲထည့်ပြီး iOS 10.3.3 ရဲ့ beta ကိုအရင် install လုပ်ပါ ငါတို့လုပ်နိုင်တယ် ဒီတူညီတဲ့ link ကိုမှ download လုပ်ပါထို့နောက် iOS 10.3.2 ဗားရှင်းကို download ရယူနိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ backup ကိုတင် အိုင်ဖုန်းပေါ်မှာ။
iS 10.3.3 beta ကိုသိမ်းဆည်းမည့် IPSW ဖိုင်ကိုထည့်သွင်းရန် Recovery mode နှင့် Mac နှင့်ချိတ်ဆက်ထားပါကကွန်ပျူတာ အသုံးပြု၍ the (Option) သို့မဟုတ် Shift ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ iTunes မှပြန်လည်ရယူပါ။ IPSW တွင် download လုပ်ထားသော version ကိုထည့်သွင်းရန် dialog box ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်တော် beta iOS 10.3.3 ကိုရွေးပြီး iPhone ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ ထိုအခါ iOS 10.3.2 ကို install လုပ်ရန်အထက်ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » iOS 11 beta မှ iOS 10 ကိုလျှော့ချလိုပါသလား။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသင့်ကိုပြတယ်
LG Innotek မှအနာဂတ် iPhone ၏ Brushstrokes
သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုမည်သို့ရှာရမည်နည်း။ Find My iPhone အက်ပလီကေးရှင်း